Abahambi abangafumanekanga abavela e-UK, eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus kufuneka babe novavanyo lwe-COVID lweeyure ezingama-24 zokungena eFrance
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseFransi ezaphulayo » Abahambi abangafumanekanga abavela e-UK, eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus kufuneka babe novavanyo lwe-COVID lweeyure ezingama-24 zokungena eFrance
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeCyprus Breaking • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • IPortugal Breaking News • Ukwakha kwakhona • Xanduva • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Inkulumbuso yaseFrance uJean Castex ubhengeze ukuba izithintelo zabahambi abagonyiweyo ziyasuswa ngoMgqibelo
IFransi ifuna iiyure ezingama-24 zokuvavanya uvavanyo lwe-coronavirus kubahambi abangafakwanga isitofu abasuka e-UK nase-5 kumazwe ase-EU.
Kubakhenkethi base-UK abangaqinisekanga, umhla wokugqibela wovavanyo olubi lwe-COVID-19 wancitshiswa ukusuka kwiiyure ezingama-48 ngaphambi kokuhamba ukuya kwiiyure ezingama-24.
Umhla obekiweyo weendwendwe ezingagcinwanga ezivela eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus zancitshiswa ukusuka kwiiyure ezingama-72 ukuya kwezingama-24.
Abasemagunyeni baseFrance babhengeze ukuba iindwendwe ezingagqitywanga ezivela e-UK, eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus kuyakufuneka zingenise uvavanyo olubi lwe-PCR okanye uvavanyo lwe-antigen lwe-COVID-19 oluthathwe ngaphantsi kweeyure ezingama-24 ngaphambi kokuhamba kwabo phambi kokuba bavunyelwe Ngena Fransi .
Ukungagcinwanga UK iindwendwe, umhla wokugqibela wovavanyo olubi lwe-COVID-19 lancitshiswa ukusuka kwiiyure ezingama-48 ngaphambi kokuhamba ukuya kwiiyure ezingama-24.
Umhla wokugqibela weendwendwe ezingagonywanga ezisuka eSpain, ePortugal, eNetherlands, eGrisi naseCyprus zancitshiswa ukusuka kwiiyure ezingama-72 ukuya kwezingama-24.
Utshintsho kwiimfuno zokungena lusetelwe ukuqala ukusebenza ngoMvulo we-19 kaJulayi.
Kwangelo xesha, iNkulumbuso yaseFrance uJean Castex ibhengeze ukuba izithintelo zabahambi abagonyiweyo ziyasuswa ngoMgqibelo.
"Amayeza okugonya ayasebenza kule ntsholongwane, ngakumbi okwahlukileyo kwe-Delta," utshilo u-Nkulumbuso, esongeza ukuba abahambi abavela kumazwe abizwa ngokuba 'luhlu olubomvu' lwase-France kusafuneka bazihlukanise kangangeentsuku ezisixhenxe nokuba bagonyiwe.
Utshintsho kumgaqo-nkqubo wokungena wase-France uza ngosuku emva kokuba i-UK iyikhuphele ngaphandle i-France kwisicwangciso sayo sokuvumela ukuba kugonywe i-Brits ngokupheleleyo kuthintelwe ukubekwa bucala ekubuyeni kwabo 'kuluhlu lwamagama'.
Abantu abafika bevela eFrance kusafuneka bazihlukanise iintsuku ezili-10 kwaye bavavanywe kabini ngenxa yokuxhaphaka kokwahluka kweBeta, ngaphambili okwakusaziwa njengokwahluka koMzantsi Afrika, utshilo amagosa.
"Sihlala sicacile ukuba asiyi kunqikaza ukuthatha inyathelo ngokukhawuleza kwimida yethu ukunqanda ukusasazeka kwe-COVID-19 nokukhusela inzuzo eyenziwe yinkqubo yethu yokugonya ngempumelelo," kusho uNobhala wezeMpilo wase-UK uSajid Javid.
Umongameli wase-France u-Emmanuel Macron uthe kule veki bonke abasebenzi bezempilo kufuneka bagonywe nge-15 kaSeptemba, ngelixa izazinzulu zeli lizwe zifuna ugonyo lomntu wonke.
Ngokworhulumente, iyonke, iipesenti ezingama-55 zabemi baseFrance bagonyiwe ngokupheleleyo.